နှင်းကေသရာချစ်တဲ့ သူရဲကောင်း ချက်တဲ့ – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » နှင်းကေသရာချစ်တဲ့ သူရဲကောင်း ချက်တဲ့ – KZ’s ထမင်းဆိုင်
နှင်းကေသရာချစ်တဲ့ သူရဲကောင်း ချက်တဲ့ – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Mar 31, 2014 in Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 39 comments
အီဖြစ်က မီနှစ်ကနဲ့ မီတူလော့ပါဘူး ပိတ်သတ်ကြီးရယ်။
ကျုပ်က နှင်းကေသရာလေးကို စားဖိုမှူးအဖြစ် လာမလားလို့ မေးတော့ သူ့ သူရဲကောင်းကြီးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး လာချက်ပါ့မယ်ပြောကရော။
အဲ! သူတို့ ဟင်းက ဖက်စပ်ချက်ကြတာကိုးဗျ။
အဲ နောက်တော့ အဲ ဒီ သူရဲကောင်းကြီး အံဆုံးပေါက်တော့ (ခွိ ဂဇက် လိ(ခ)ကွ ဘာတတ်နိုင်သေးတုန်းးးး ) အဲလာ အကြောင်းပြပြီး နှင်းကလေးကို ဂျီဂျောင်ကြတယ် ထင်ပါတယ်။
ကျုပ်က ဒီဘက်က ဟင်းစပ်တွေ တဒီဒီတောင်းးးး၊ ဟိုဘက်က လူမမာက တဒီဒီ ဂျီကျတဲ့ ကြားက နှင်း က သူချက်တဲ့ ဟင်းတွေ အကြောင်း ရေးပြီး သူရဲကောင်းကြီး ချက်တဲ့ ဟင်းကို ရေးပေးဖို့ စောင့်ရတာပေါ့ဗျာ။
ဖြစ်ပုံများးးး သူရဲကောင်းကြီးတို့ ကိုယ်တိုင်တောင် မရေးတော့ဘူးးး အော်ပေးသမျှ လိုက်ရေးပေးမဲ့ သူရတော့ (နောက် လိ(ခ) တစ်ခု၊ ညင်းညင်းညင်းးးး ) နှင်းက သူတိုင်သလောက်ရေးပေးရ သတဲ့။
ဒါကို “ဟင်းတွေက အိမ်ချက် သမရိုးကျတွေမို့ ထူးခြားတာပဲ ရေးတဲ့..ကျန်တာတွေ မရေးနဲ့ဆိုလို့” (၃) မျိုး (၃) ရက်စာပဲ ရခဲ့ပါတယ် ပိတ်သတ်ကြီးရယ်။
ကျန်ရက်ကဟင်းစပ်တွေထဲက သိချင်တာရှိရင် ကော်မန့်မှာမေးကြပါ။
ဒါကိုကို နှင်းကို ခေါင်းစဉ်တပ်တာ အသေးစိတ်လို့ ဆူသေးသတဲ့။ (တတိယ လိ(ခ) )
ကဲပါလေ။ သူများ အကြောင်း ဖွလို့ (အဲလေ) ပြောလို့ ဝပြီဆိုတော့ ဟင်းစပ်တွေ ဆီ သွားကြတာပေါ့။ ခိခိခိ။ လာဆူရင် အဲဒါကိုပါ ဂဇက် လိ(ခ) ထဲ ပြန်ရေးမယ်။
(၁) ပုစွန်ထုပ် ဆီပြန်၊ ခရမ်းချဉ်သီး တောငါးပိချက်၊ တို့စရာ – ဥနီ၊ဘိုစားပဲ၊ပဲရွက်၊ ဂေါ်ဖီဟင်းခါး
(၂) ငါးဘတ်မွှေ စပါးလင်အုပ်ချက်၊ ပဲရွက်ပဲငါးပိကြော်ချက်၊ ၀က်ရိုးအဖြူထည်စွပ်၊ ငါးကွမ်းရှပ်ထောင်းကြော်(ရယ်ဒီမိတ်)တကယ်တော့ ငါးဘတ်မွှေဆိုတာ ချက်ရတာ ဟောင်ကောင်မှာ အလွယ်ဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဈေးထဲက ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာ ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ အေးခဲပြီး Cat fish ငါးအသားလွှာတွေဆိုတာ ဗမာလို ငါးဘတ်ဖြစ်နေလို့ပါ။
တကယ်တမ်းတော့ Cat fish ဆိုရင် ငါးခူဖြစ်ရမှာ ခင်ဗျ။
အဲ့သည့် အရေပြားမပါ၊ အရိုးမပါတဲ့ ငါးအသားလွှာတွေကို ရေခဲလုံးဝပျော်အောင်ထား၊ ပြီးမှ အိုးတစ်လုံးထဲ ဂျင်းလက်တစ်ဆစ်လောက် ထုထောင်းထားတာရယ်၊ စပါးလင် အဖျားပိုင်းလေးကို ထုံးထားတာရယ်၊ နနွင်းရယ်၊ ငံပြာရည်ရယ်နဲ့ မီးအေးအေးထားပြီး ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ နည်းနည်းဆူလာမှ ယောက်မတစ်ချောင်းနဲ့ ငါးတွေကို ကြေအောင် ချေပစ်လိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာ။
ရေခန်းသွားရင် အိုးချ၊ ကြက်သွန်အနီ၊အဖြူ ၊နုပ်နုပ်စင်းထားတဲ့ စပါးလင်အရင်းပိုင်း၊ ဟင်းချက်ငရုတ်သီးမှုန့်တွေကို ဘလန်ဒါထဲ ကြေညက်သွားအောင်ချေ ၊ ဆီများများနဲ့ ဆီသတ်လိုက်တာပေါ့။
အနံ့မွှေးလာရင် ချေထားတဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း ၃တောင့်လောက်ထည့်၊ ချေထားတဲ့ ငါးတွေထည့်ပြီး ဆီပြန်ရင် စားလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။
(၃) ကြက်သားလုံးငရုတ်ပွ ချဉ်စပ်၊ မှိုကြက်ဥကော်ရည်စွပ်
(၄) ငါးကွမ်းရှပ် ချဉ်စပ်မဆလာ၊ ဥနီဥစိမ်းကြက်ဥကြော်
.ငါးကွမ်းရှပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငါးခြောက်ကလွဲရင် အစိမ်းစားခဲကြပါတယ်။ ယိုးဒယားလို နိုင်ငံမျိုးတောင်မှ ငါးကွမ်းရှပ်ကို ခဲပြားနဲ့ပတ်ပြီး ကင်စားတာကလွဲရင် အခြားနည်းနဲ့ အတော်စားခဲပါတယ်ခင်ဗျ။
ကျောက်စ်ရဲ့နည်းကတော့ Middle-East မှာနေတုန်းက ဒရိုင်ဘာကတော် တမီးကုလားမကြီး သင်ပေးတဲ့နည်းပါ။
သူ့နည်းက လွယ်လည်းလွယ်ပြီး ရှင်းလည်းရှင်းပါတယ်။
ငါးကွမ်းရှပ်ကို ခေါင်းဖြတ်၊ ဗိုက်ဖောက်သန့်စင်ပြီး အတုံလေးတွေ တုံးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ငါးမဆလာ၊ဆားနဲ့နယ်ပြီး နှပ်ထားပါ။ နာရီဝက်လောက်နေမှ ကြက်သွန်ဖြူ ၊နီ၊ဂျင်း၊ပျင်းတော်သိမ်၊ငရုတ်သီးစိမ်း၊ဟင်းချက်မှုန့်၊ဆနွင်း တို့ကို ဆီသတ်ပါတယ်။ အနံ့မွှေးလာရင် မန်ကျည်းရည် နဲ့ အုန်းနို့နည်းနည်း ထည့်ပါတယ်။
ပြီးမှ ဟင်းရည်ဆူလာရင် နှပ်ထားတဲ့ငါးတွေနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးလေးစိတ်ကွဲကို ထည့်ပြီး အရသာ အပေါ့အငန်မြည်း အသင့်စားသုံးရုံပါပဲ ခင်ဗျာ။
တစ်ခု သတိထားဖို့က ဟင်းရည် မဆူခင် ငါးလုံးဝ မထည့်ပါနဲ့။
မန်ကျည်းမှည့်နေရာမှာ ချဉ်စော်ကားသီးသုံးရင်လည်း ရသလို ကျောက်စ်ကတော့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသားတွေ သုံးတဲ့ ဂေါ်ရကာ( Goraka ) ဆိုတဲ့ အချဉ်သီးနဲ့ ချက်ထားတာပါ ခင်ဗျား။
ဥနီကို အခွံခြစ်၊ရေဆေး မထူးမပါး အချောင်းလေးတွေ လှီးပါ။
ဥစိမ်းကတော့ ဥဖြူလို နည်းနည်းစပ်တဲ့အရသာရှိလို့ လှီးပြီးအချောင်းလေးတွေကို ဆားရည် ခဏစိမ်ပေးရပါမယ်။
ပြီးရင် ဆားရည်ပျောက်ရန် ရေထပ်ဆေးပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်ထားတာ ထည့်ဆီသတ်၊ ဥဖြူချောင်းထည့် ခဏမွှေပါ။
ခဏနေမှ ဥနီထည့် ဆား၊အရသာမှုန့်၊ခရုဆီတို့ကိုထည့်ပါ။
နည်းနည်းနွမ်းပြီဆို ကြက်ဥဖောက် အုပ်ထည့်ရင် ဥစိမ်းကလည်း ချို၊ဥနီကလည်း ချိုနဲ့ အစိမ်းကြော် အချိုတစ်ခွက်ရပါပြီ။
(၅) စောမို လက်ဖက်ထမင်းနယ်၊ ၀က်အူချို ၊လျှာချက်၊ မျစ်ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ဘရိုကိုလီကြက်ဥဟင်းချို
(၆) ဆတ်သားခြောက်ဆီဆမ်း၊ ကြက်ဥသီးစုံပဲကုလားဟင်း၊ ရှမ်းချဉ်ပဲငါးပိအချိုကြော်၊ ငရုတ်ခွဲကြမ်းဆီစိမ်
(၇) ယောက်သွားပင်စိမ်းဟင်း၊ ၀က်သားဖက်ထုပ်ရေညှိဟင်းချို ၊ ပန်းပွင့်ကြက်ဥကြော်
ခရု၊ယောက်သွား၊ဂုံး မျိုးကွဲတွေသာ လိုက်ရည်နေရရင် ဆုံးနိုင်ဖွယ် မမြင်ပါခင်ဗျ။
ယောက်သွားကို များသောအားဖြင့်ကတော့ ဟင်းရည်ထဲမှာ အချိုဓာတ်ရအောင် ထည့်ချက်ပါတယ်။
ယိုးဒယားတွေကတော့ ယောက်သွားအစိမ်းကို ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ပြုတ်ပြီး အချဉ်နဲ့ တို့စားပါတယ်။
အဲ့သည်လိုပဲ အခွံမပါတဲ့ ယောက်သွားကို ပင်စိမ်းရွက်၊ငရုတ်သီးစိမ်း၊ငရုတ်ကောင်းစေ့ အစိမ်းနိုင်နိုင်နဲ့ ပူပူစပ်စပ် ချက်စားသေးတယ် ခင်ဗျ။
ကျောက်စ်ကတော့ အခွံခွာရတာလည်း အလုပ်ရှုပ်၊ ခွာပြီးသားလည်း အသင့်တွေ့တာမို့ ၀ယ်ပြီးချက်စားပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက ယောက်သွားကြားထဲမှာ ရေမှော်ဖတ်တွေ မစင်ရင် ဗိုက်နာတတ်တာမို့ သန့်စင်ပြီး ရေစစ်ထားပါ။
ပါးပါးလှီးထားတဲ့ Spring Onion၊ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ပင်စိမ်းရွက်တွေကို ဆီသတ်ပါ။
နည်းနည်းနွမ်းပြီး အနံ့မွှေးလာရင် အရောင်တင်မှုန့်ထည့်ပါ။
ပြီးမှ ယောက်သွား၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်၊ ငံပြာရည်၊ သကြား တစ်ပြိုင်ထဲ ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
အချိုမှုန့်မပါ၊ အသားမှုန့်မပါ၊ ဟင်းချက်မှုန့် မပါပေမယ့် အလွန်အရသာရှိတဲ့ ယောက်သွားဟင်းတစ်ခွက် ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ပတ် ဗော်လန်တီယာ စားဖိုမှူးလေး တစ်ယောက်လောက် လိုချင် ထာ…………!
သူ့ကိုပြောသမျှ အကုန်လုံး မိဇာဂျီးကို လိခ်တော်မူတော့ ကိုကိုကျောက်စ် တေဘီပေါ့…
စနိုဒန်နှင်း ကို အိမ်ပြန်ရောက်မှ ဇက်ကြောဆွဲပေးပြီး ဆုံးမရမယ်… ခွိ
ဖြေပေးပါ့မယ် ဂဇက်ပိတ်သတ်ကြီး….. သိလိုသည်များ မေးတော်မူကြပါ ခီညာ…
(အဲ… လိခ်အကြောင်းမဟုတ် ၊ ဟင်းအကြောင်း… ဟင်းအကြောင်း…)
ခင်ညားကို ကျုပ် မနာလိုဖစ်နေတာ ကိုကိုကျောက်ရဲ့။
ကျုပ်တို့မှာ စိတ်ထဲရှိတဲ့ ပို့(စ) တွေ လက်က မရေးနိုင်လောက်အောင် အပျင်းထူ (အဲလေ) အလုပ်များနေချိန်မှာ ……………..
ခင်ညား ဇနီးချောလေးက ရေးတယ်၊ စာလုံးပေါင်းပါစစ်ပေးတယ်ဆိုတော့ အညင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ လိ(ခ) ရတာပါ ခင်ညာ!!
သိပြီးသား ဟင်းချက်နည်းတိုင်းမှာ ချက်တဲ့သူပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ် ကိုကြီးကျောက်။
အဲတော့ ကျန်တဲ့ ၄ ရက်အတွက်ပါ ရေးပေး (အဲလေ) တိုင်ပေးပါ။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ။။။။ သိလိုတာ မေးခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ ….
ဟိုလေ .. ဟို ….
ထမင်း ထည့်တာ ကလေ …ဟို … ဟို..
ထည့်ကြွေး (စား) ရတာလား ခင်ဗျ …..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ ။ ။
အဲ့..ကိစ္စကိုကျုပ်လည်း ဖွဘုတ်တော်ကြီးမှာမြင်ကတည်းက ပြောသေးတယ်ဗျ…ကထူးဆန်းရ
ဒီလူဂျီးတွေ ကျောက်(စ) ကို ပြောနေကြတယ်။
အဲလို တွဲရတယ် ဟုတ်ဘူးလားးးး
အာဟင့်… စီဂျေကြီး ကလည်း မေးပြန်ပြီဆိုတော့ ရှင်းမှဖြစ်တော့မယ်…
ဟောင်ကောင်ကို ရောက်စ Ikea ကနေ အနက်ရောင် ပန်းကန်အစုံဝယ်ပါတယ်…။ အိမ်ထောင်ကျမယ်လည်းမထင်ထားခဲ့တာမို့ လက်တွေ့ရာဝယ်လိုက်တာပါ…။ နောက်ပိုင်း… ပန်းကန်အကြီး နှစ်ချပ်က ဘာမှမဖြစ်ပေမည့်… အသေး တစ်ချပ်က ဘက်ပဲ့သွားပါတယ်… ။ တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ကိစ္စမရှိ…။
အခု အိမ်ထောင်ကျပြီဆိုမှ မဒမ်အတွက် လိုက်ရှာတာ မျိုးတူက ဝယ်မရဘူး…။ နောက်ပြီး မဒမ်က… ကျောက်စ်ငမဲကို ယူပြီးပြီမို့ ပန်းကန်အနက်နဲ့ မစားချင်ပါဘူးတဲ့…။ အသစ်ဝယ်ရအောင်ပါဆိုတော့လည်း အိမ်မှာအများကြီးတဲ့…။
ဒီတစ်ခါ ရွာကအပြန် ပန်းကန် သွေးတူရောင်တူ သယ်ခဲ့ပါမည် ဆိုတဲ့အကြောင်း…
ငါးကွမ်းရှပ်က ကောင်းမဲ့ပုံ… ဒါပေသိ အကောင်မပျက်ဆိုတော့ စားရဲဝူး… ငါးတန်တို့ ငါးမြင်းတို့တောင် အကောင်ကြီးတော့ အတော်ညှီတာ…. ကျောက်စ် အညှီပျောက်အောင် ချက်ထားပုံက စိတ်ဝင်စားစရာ
ယင် ဖို တောင် မသန်းပဲ နေရော့မယ်။
အစက အတော်ညှီမယ်ထင်ထားတာ ၊ သူ့နည်းနဲ့ချက်တော့ မညှီတဲ့အပြင် အတော် အရသာရှိတယ်…။ ပင်လယ်ငါး မစားတဲ့ မိနှင်းတောင် တစ်ထိုင်ထဲ ၂တုံး ကုန်ပါတယ်…ဆို
ကျောက်စ် ရှူးပေါက်ရင်မစိုတာ ကိုရင်ကြောင် ဘယ်လိုသိ…
အူးလေးတို့နဲ့ လာနေချင်ပါတယ်လို့… ဟင်းလည်းချက်တတ်၊ ဟင်းကောင်းလည်းစားရ၊ တီနှင်းလည်း အဖော်ရ.. မကောင်းဝူးလားဟင်င်..
ဦးကျောက်တို့မျာ အိပ်ခန်းက တခန်းပဲရှိလာကွဲ့… မွန်လေးဘယ်မှာ သွာနေမီဒုံး.. ဧည့်ခန်းမှာလဲ ဦးကြောင်နေဒါ….။
ဖျား ဖျား… ဝမ်းမနာ သမီးတစ်ယောက် ကောက်ရမည့်ကိန်း… ဂိ
တစ်ရှူးနဲ့ချည်းသုပ်မနေနဲ့… အစားအသောက်နဲ့ဖျာရောင်းဖို့ ပြင်ညာယူပါ…
ဦး‌ကျောက်‌တို့စင်‌‌ပေါ်ရာက်‌‌နေတာ…ခဲနဲ့‌ပေါက်‌ချင်‌စိတ်‌ဖြစ်‌မိတယ်‌… :mrgreenn:၀ိတ်‌‌လျော့‌တော့မယ်‌…. ဘာ..ဘာ..ဘားမှစားချင်‌‌တော့ဘူး….
ဒါကို သူက ဆူချင် ဟောက်ချင်သေးတာ။
ကျောက် မက်နှာ တစ်ကျွန်းမှတ်ထင်လိုက်လာတဲ့ မိန်းမ လှလှဖြူဖြူလေးကို။
သထိန်းမကြီးခွစ်က စိန်ခဲ မြခဲတွေနဲ့ ပေါက်မယ်ဆို ရပါတယ်ဗျ…
အလဲ့… ဝိတ် လျော့ တော့ မယ်…. ဆိုပါလား… အာဟိ ခွိ ခွိ
ဖွဘုတ်မှာ တင်တုန်းကလဲ ဂလုစ် ဂလုစ် နဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရဖူးပြီ
ဒီမှာ ထပ်တွေ့လို့ ထပ်ဖြစ်ရင် ရိုင်းရာကျမယ်မို့……
အဟမ်း… အဲဒါဆိုလည်း… ဂလုစ် ဂလုစ် တွေကို ဆု ထားလိုက် သဂျား…
လောလောဆယ် ကျအု ကျအုလို့ အော်ရမလို
နာ့ မောင်လေး ပျောက်နေတာ ကြာပါပေါ့လားးး
ဘာတွေ ပြောသွားတာတုန်း နားမလည်ဘူးတော့။
ကိုရင်စီသွပ်နှယ် ဘူးသီးငါးပေါင်းကြော် ပြောင်းရောင်းနေပြီကိုး… ဟိ
ချစ်ဇနီးနဲ့ သမီးလေးကို ချက်ကျွေးဖို့ မှတ်သွားပါ ကိုရင်…
အခုခေတ်ကြီးကတော့ ရှယ်ဘဲ ။
တနေ့က Sydney က ဗမာဆိုင်သွားတယ် ။
ငပိရည် ထင်မကဘူး ၊ တို့စရာ ဒညင်းသီး ဆားရည်စိမ် ၊ ကတက်ချဉ် ၊
စတာတွေကိုပါ မြန်မာပြည်ကနေ စည်သွပ်ပြီးတောင် ပို့နေကြပြီ ။
စားကြည့်တော့လဲ အရသာ မဆိုးဘူး ၊ ကောင်းတယ် ။
ဆိုင်မှာ ဒန့်ဒလွန်သီး ချဉ်ရည်ပါ ရောင်းတယ် ။
စဉ်းစားလို့ မရဘူး ၊ သြဇီမှာ ဒန့်ဒလွန်သီး ဘယ်က ရတယ်မသိ ။
ခေတ်ကြီးက အကုန် ရ နေပြီ ၊ ဝယ်ဖို့ ပိုက်ပိုက် ရှိဖို့ဘဲ လိုတော့တယ် ။
( ခက်တာက ကိုယ့်မှာ ပါးရှားတာကလည်း အဲဒီ ပိုက်ပိုက် ဘဲ )
လောလောဆယ်တော့ ၂ ရက် ဆက်တိုက် ငပိရည် နှင့် ဒညင်းသီး ၊ ကတက်ချဉ် ၊
ဆွဲလိုက်တာ ၊ အခု နဲနဲ သွေးတက်ချင်သလို ဖြစ်နေတယ် ။
ကဘာဂျီး ဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်လာတော့မယ် ဆိုတာ တဖြေးဖြေးထင်ရှားလာပြီ။
အမှန်တော့ ယိုးဒယား ငပိရည်က ပိုကောင်းတယ်။
သွေးမတက်ဘူးးး ဘာလို့တုန်းတော့ မသိ။
အဘတို့ကျွန်းကြီးက ကျောက်စ်တို့ ကျွန်းသေးထက် စုံသဗျ…
Asian Grocery ကို ကျောက်စ်နှမ ခေါ်လို့လိုက်သွားတာ… ထူးထွေသည့်အံ့ရာ…
ငပိရည် ၊ ဒညင်းသီးဆားရည်စိမ် ၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်ကနေ ကိုင်းဥတွေအထိ တွေ့ခဲ့ရတယ်…
ယောက်ဖတော်က သူ့ဇနီး ကျောက်စ်နှမကို ငပိရည်ပုလင်းတွေက Expire ဖြစ်နေပြီတဲ့…
ဟီ ဟိ… ရယ်ချင်ပက်ကျိ
ဗိုက်ဆာတိုင်း FB ပေါ်မှာ
ကျောက်စ် ကတော် တင်ထားတဲ့
အဆာဖြေ နေရတဲ့ သူပါကွယ်…။
ကျန်း… ကိုကြီးဘလက်ကို အမကြီးမအိမ်စိုးမေနဲ့ တိုင်ပြောမယ်…
ဒီလူကြီးကို ဟင်းချက်မကျွေးပါနဲ့လို့… ဟီ ဟိ
ယူအက်စ်ကိုတော့..ငါးပိ..ငါးခြောက်..လဖက်.. အပြင်.. ပေါ်ဆန်းမွှေးပါ.. အင်ပို့..ကွန်တိန်နာတွေနဲ့ဝင်လာသမို့.. အယ်လ်အေကလူတွေ.. ဈေးရောင်းဈေးဝယ်.. အလုပ်ဖြစ်နေကြသဗျ..
ပြော၇ရင်တော့..ဆန်က.ပေါင်၂၀ကို ၂၂ဒေါ်လှမို့.. တော်တော့်ကိုဈေးကြီးတဲ့အမျိုးအစားထဲပါနေကြောင်း… လိခ်လိုက်ရင်း…
ဒီလောက်ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ.. ကျွေးတတ်/စားတတ်ကြတဲ့.. ဇနီးမောင်နှံ… “၀”ကြပါစေကြောင်း.. ဆုမွန်ပို့ပေးရင်း…
ကျုပ်ကတော့..ညကြီးမနက် ဗိုက်ဆာလာသမို့.. ကော်စကိုက ၀ယ်လာတဲ့အရွက်ထုတ်..ငပိရည်ဒရက်စင်လုပ်.. အုပ်လိုက်ဦးမယ်ဖြစ်ကြောင်း…
ချွိချွိရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ရယ်မိတာ ပြန်ကာနီး ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ ခုမှ ရောက်ရတာ..ရှုပ်ဆို..မြန်မာပြည် ကိုးနတ်ရှင်ရီး ကြောက်လို့(ဟိုမှာ တင်ရခက်မစိုးလို့) တင်စရာ ပုံကြွေးတွေ တည်းဖြတ်၊ စွတ်တင်နေရလို့ပါ..ဟိ.. နောက်ဆို..ကျောက်စ်တော့ မဆူ၊ မဟောက်၊ မပြောရဲတော့ဘူး..လိခ် မစိုးလို့ …
ဦးစွာ..သဂျီးပေးတဲ့ဆုနဲ့ “၀” ပါရစေ..
ဆန်က(မြန်မာပေါ်ဆန်းလား?) ပေါင် ၂၀=9KG လောက်ကို $22 ဆိုတော့ ပျမ်းမျှ ၂၂၀၀၀ ကျပ် ..ဈေးများပါတယ်..ရန်ကုန်စတိုးဆိုင်မှာတောင်မှ ပြည်တွင်းပေါ်ဆန်းကောင်းကောင်းက2KG တစ်ထုပ် ၂၂၀၀-၂၄၀၀ ကျပ်အထိပဲ ရှိတော့9KG ၁၀၈၀၀ ကျပ် အလွန်ဆုံးပါ..ဒီမှာတော့ Thai Rice (8 KG) တစ်အိတ် HKD 81.90 ဆိုတော့ သူလည်း အများဆုံး ၁၀၇၀၀ ကျပ်ပါ.. ဈေးတူ၊ဆန်သားပိုကောင်း ကျောက်စ်၊နှင်း ၅ပတ်ကျော် စားပါတယ်..
မအားလို့ နောက်မှပြန်လာတော့မယ်။ အခုတော့ ပုံတွေပဲမြည်းသွားတယ်
ဒီမှာက ဆန်ကို ယိုးဒယားက လာတဲ့ ကြိုးကြာ တံဆိပ် ၁၀ ကေဂျီကို စလုံးဒေါ်လာ ၂၉ ဆိုတော့
သများ စားနှုံးနဲ့ ဆို စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့ ပိတ်သတ်ကြီးရယ်။
ဆန်လျှော့စားပြီး ဂျုံ ခေါက်ဆွဲလေးပိုစားမှ။
နောက်ခေါက်မှ ခေါက်ဆွဲမျိုးစုံတင်ပါ့မယ် ပိတ်သတ်ကြီးးးး
အိမ်မှာတော့ ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ ၊ဆား၊ နနွင်းနဲ့ ထောင်းပြီး ငါးဆုပ်လုံးကြော် တစ်မျိုးဘဲချက်စားဖြစ်တာရယ်…